SF Bay Area Burmese (Myanmar) Community and Cultural Center Activities & Events: 2014 San Francisco Bay Area Burmese Community Thingyan New Year Water Festival!
2014 San Francisco Bay Area Burmese Community Thingyan New Year Water Festival!
2014 SF Burmese Thingyan is Here!
May 25, 2014 (Sunday, Memorial Day Weekend)
Place: Kennedy Park, 1333 Decoto Rd, Union City, CA94587
Please contact us for sponsorship, donation, food donation, volunteers, pageant and entertainment and more information.
Food Fair: Cho Oo (510) 552 7973, Htway Lay Khine (408) 347 1962, Myo Lwin (510) 857 7852
Sponsorship: Nwe Oo (510) 213 1452, Wai Phyo (415) 577 6505, Zargy Myint Aung (408) 504 0050
Miss Thingyan Pageant: May Ling Phyu (510) 449 4006
Entertainment: Myat Soe Mon (415) 407 7702, Kyin Nar Aye (650) 278 2672, Mie Mie (510) 333 9107, July Hsu (510) 565 8783
Paying Respect to Communtiy Elders:Eidarli Myint Aung (415) 341 6491, Sanda Win (650) 303 7738, Soe Soe Myint (415) 515 2639
Water Play Activities: Moe Kyaw Thu (650) 834 0184, Moe Zaw (415) 244 6962
Media & PR & Tables: Mary Nicely (415) 517 0393, Valerie (415) 816 8800, Nwe Oo (510) 213 1452
Community Partnership Tables: Wai Phyo (415) 577 6505, Cissy Khin (510) 468 5008, Mya Shwe Myaing (510) 505 4282
Decorations and Stage: Kyaw Kyaw Soe (415) 377 7966, Ko Sein (510) 579 8506, William Chan (510) 468 3951
Thingyan Volunteers: Kyaw Min Oo (415) 722 4620, Lai Chow (650) 267 3704, Ko Sein (510) 579 8506
For Community Center Savings Can and General Information: Cho Oo (510) 552 7973, Kyaw Kyaw Soe (415) 377 7966, Myat Soe Mon (415) 407 7702, Zargy Myint Aung (408) 504 0050, Nandi Kyaw Min (415) 595 4591
5th Annual Burmese (Myanmar) Community Center Fundraiser
2014 SF Bay Area 3rd Community Thingyan
အစီအစဉ် နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ (Programs and Objectives)
၁။ ဤသင်္ကြန်ပွဲမှ ရရှိသမျှ အမြတ်ငွေများ အားလုံးကို Community သို့ ကြေညာ၍ SF Bay Area ၌ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ အဖွဲ့အစည်း မရွေး အသုံးပြုနိုင်မည့် ပထမဆုံး မြန်မာ Community & Cultual Center တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေသို့ လှူဒါန်းသွားပါမည်။
All the fund raised at the event will be disclosed to the community and donated to found the very first Myanmar Community and Cultural Center in SF Bay Area for all people of Myanmar regardless of their ethnicities, religions and associations.
၂။ ပွဲ Sponsor များ နှင့် အစားအသောက် အလှူရှင်များ Tax Deduction ရနိုင်ရန် အတွက် Burmese Youth Association (BYA) မှ Tax Return Receipt များကို အလှူရှင်များသို့ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားပါမည်။
Burmese Youth Association (BYA),a501(c)3 organization, will issue tax return receipts for sponsors and food donors.
၃။ အစားအသောက် ရောင်းချသူများအား အရင်းရော အမြတ်ပါ လှူဒါန်းရန် နှင့် Non-profit ရန်ပုံငွေ ပွဲ permit ယူထား၍ ငွေကြေး အစား ကူပွန်လက်မှတ် များဖြင့်သာ ရောင်းချပေးရန် အထူး မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။ လာရောက် ရောင်းချလှူဒါန်း သူများ၏ စေတနာကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ပွဲအပြီး ကျေးဇူးတင်ပွဲအခမ်းအနား၌ အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ချီးမြှင့် ပေးသွားပါမည်။
Food vendors are highly encouraged to donate food as well as profits for the event and to sell only with the food coupons instead of accepting cash because we only have the non-profit fundraiser permit. Lucky-draw prices will be given to all the food vendors at the appreciation lunch after the event.
၄။ အထူးဖိတ်ကြားခံ ဧည့်သည်များအဖြစ် မြန်မာပြည်မှ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးသော ‘သရဖူ’ မဂ္ဂဇင်းပိုင်ရှင်နှင့် ဖက်ရှင် စာရေးဆရာမ ‘နန်းအိအိဇာ’ နှင့် NLD မှ ရွေးချယ်ခံ ပါလီမန် လွှတ်တော်အမတ် ‘ဒေါ်စန္ဒာမင်း’ တို့နှင့်အတူ California State Senator ‘Ellen M. Corbett’, ‘Union City’ မြို့တော်ဝန် နှင့် ‘Daly City’ မြို့တော်ဝန်တို့မှ သင်္ကြန်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ဆင်နွှဲ ဖွင့်လှစ်ပေးကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar’s prominent writer ‘Nan Ei Ei Zar,’ Elect Member of Myanmar Parliament “Sandar Min’ from NLD and Senator Ellen Corbett, Daly City Mayor and Union City Mayor will be among the VIP guests of our Thingyan.
၅။ အစီအစဉ်များ အနေဖြင့် သင်္ကြန်ယိမ်း အကအလှ နှင့် ကလေးများ၏ ဖက်ရှင်ရှိုး၊ “2014 Miss Bay Area Thingyan” Pageant ပြိုင်ပွဲ၊ သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲ၊ Games မျိုးစုံ၊ DJ နှင့် ရေကစားမဏ္ဍပ် တို့ အပြင် Bay Area နယ်ခံ အနုပညာရှင်များဖြစ်သော ‘ဇယံဓ’၊ ‘စုဝေ’ နှင့် ‘Aurora’ တေးဂီတ အဖွဲ့မှ ဂီတမှူး ကိုခင်စိုး နှင့် တေးသံလှိုင် တေးဂီတ အဖွဲ့မှ တေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပါမည်။
This year event will have special programs such as Thingyan Yein Dance, “Miss Thingyan 2014 Pageant” Contest, Paying respect to elders, Games center, water playing pavilion and performances from Bay Area artists like Zayanda, Su Wai and other live band performances.
၆။ သင်္ကြန်ပွဲတော် အထူးအစီအစဉ် အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အသွားအပြန် China Airlines လေယာဉ်လက်မှတ် (၁) စောင် နှင့်အတူ အခြားဆုပေါင်းများစွာ ပါဝင်သော raffle ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝယ်ယူ ကံစမ်းနိုင်ပါပြီ။
There will also bealucky draw to winaround trip air ticket sponsored by the China Airlines. You can buy raffle tickets during the event to win many prizes including this valuable air ticket.
၇။ ပွဲအစီအစဉ်များ နှင့် နောက်ဆုံးရ Information များ အသေးစိတ်ကို http://bmccfr-events.blogspot.com ၌ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Please follow us on http://bmccfr-events.blogspot.com for detailed event programs and latest information.
The second fundraiser was held at the Serramonte Del Rey in Daly City on July 9, 2011. And the third and the fourth fundraisers were held at the Kennedy Park of Union City as the first Burmese Community Thingyan Festival of SF Bay Area on May 27, 2012 and May 26, 2013 respectively. The upcoming fifth fundraiser is also at the Kennedy Park, Union City on May 25, 2014.
So far, we have raised approximately $35,000 for the Community Center establishment and the upcoming plans are on the way to make our Community Center dreams happen together in the very near future!
2014 SF Thingyan Sponsors:
2. B. K. Kee Foundation
1. Dixon Landing Family Dental
2. Ko Steven Chang, Omega Auto
4. Ma Zargy Myint Aung Family
1. Community Partners International (CPI)
2. Stacy Lin, Farmers Insurance Agency
3. Dr. Simon Lim, D.D.S
4. Dr. San Win & Dr. Fong Chu Lee, D.D.S.
5. CHAA (Community Health for Asian Americans)
6. Jin Lan (Linda) Shieh, New York Life Insurance
7. Dr. David Chee and Daw Deborah Chee Family
1. Daw Mary K. Yap Family
2. William M. Dyn, Aesthetics Dental Lab
3. Shan Auto Service
4. Dr. Myint Swe, D.D.S.
5. Pleasanton Flower Shop
6. U Myint Soe and Daw Htay Htay Family
7. Jamie Jian, Allstate
8. Daw Htway Lay Khine and Mya Shwe Myaing Family
Event Presenting Fiscal Sponsor
Event Insurance Sponsor
Event Food Operating Permit Sponsor
Oakmead Printing <http://oakmead.com/>
1. Air & Sea Tour, Inc.
2. Captain Joe, Free Bird Bay Flight Tour
(Sponsors, Food Donors and Volunteers are welcome!)
တက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြမည့် အထူး ဧည့်သည်တော်များ စာရင်း
(2014 SF Bay Area Thingyan VIP Guests List)
1. Ellen Corbett, California State Senator and Senate Majority Leader
2. Carol Dutra-Vernaci, Mayor, Union City
3. David J. Canepa, Mayor, Daly City
4. Daw Sandar Min, Member of Parliament (Pyithu Hluttaw), Union of Myanmar
5. Daw Nan Ei Ei Zar, Myanmar fashion writer & Owner of Tharafu (Crown) Magazine
6. Lorrin Ellis, Vice Mayor, Union City
7. Pat Gacoscos, Council Member, Union City
8. Jim Navarro, Council Member, Union city
9. Ray Buenaventura, San Mateo Superior Court Judge
၂၀၁၄ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဗေးဧရိယာ မဟာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် အစီအစဉ်များ
2014 SF Bay Area Burmese Community Thingyan Programs
May 25, 2014 from 9:45 am to 4:00 pm
Kennedy Park, 1333 Decoto Road, Union City, CA 94587
၁။ သင်္ကြန်ပွဲတော် မိတ်ဆက် - အခမ်းအနားမှူးများ (ကိုအေဒရီယန်ဇော် နှင့် မမေဇင်စိုး) (9:45 am)
2014 Thingyan Event Intro – MCs (Adrian Zaw and May Zin Soe)
၂။ သင်္ကြန်ရှေးဦး ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ်
Thingyan Prelude Music
Aurora အဖွဲ့ဂီတမှူး ကိုခင်စိုး နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို တေးသံလှိုင် တေးဂီတအဖွဲ့မှ တေးသီချင်းများဖြင့် Live ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးပါမည်။
Aurora Band Musician Ko Khin Soe and San Francisco Tay Than Hlaing Group Live Band Performance.
၃။ ‘သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ’ အခမ်းအနား (10:30 am)
‘Paying Respect to Burmese Community Elders’
၄။ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခြင်း - မြန်မာကွန်မြူနီတီ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ (11:00 am)
Thank You Speech – Burmese (Myanmar) Community & Cultural Center (BMCCC) Committee
၅။ အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခြင်း
Presenting gifts to Ruby Sponsors & SCBA representatives
၆။ အထူးဧည့်သည်တော်များ စကားပြောကြားခြင်း (11:10 am)
Speeches from VIP Guests
၇။ ၂၀၁၄ မဟာသင်္ကြန် အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ခြင်း (11:40 am)
2014 Thingyan Opening Ceremony
၈။ ၂၀၁၄ မဟာသင်္ကြန် အဖွင့်အက - ‘မန်းတောင်ရိပ်ခို’ (ဆို - ဇယံဓ၊ က - ဗေးဧရိယာမှ အကမယ်များ)
Opening Dance – ‘Mann Taung yeik Kho’ (Vocal – Zayanda; Dance – Bay Area Dancers)
၉။ သင်္ကြန် ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် - ပထမပိုင်း (12:00 pm)
Thingyan Performances – I
(၁) ‘ရက်မြတ်သင်္ကြန်’ (က - ဂျက်စီကာချမ်း၊ ကိုရီဟို၊ မေဇင်ခွန်း နှင့် ကြည်သာမင်း)
‘Yet Myat Thingyan’ (Dance – Jessica Chang, Korrie Houe, Mayzin Kung and Kyithar Min)
(၂) ‘မျှော်လင့်နေတုန်း ပျို့ဖုန်းလှမ်းခဲ့ပါ’ (ဆို - မမီးမီး၊ က - အိအိဖြူ၊ အိအိဖြိုး နှင့် အိအိဖူး)
‘Myaw Lint Nay Tone Pyo Phone Hlan Khae Par’ (Vocal – Mie Mie; Dance – Ei Ei Phyu, Ei Ei Phyo and Ei Ei Phoo)
၁၀။ ‘ကြော့ရှင်းယဉ်သွယ် ၂၀၁၄ သင်္ကြန်အလှမယ်’ ပြိုင်ပွဲ - ပထမပိုင်း (12:20 pm)
‘2014 Miss Bay Area Thingyan’ Pageant – Part I
- အမှတ်ပေးဒိုင်လူကြီးများကို ပရိသတ်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
- Introducing Judges to Audience
(ပြိုင်ပွဲဝင် သင်္ကြန် အလှမယ်များမှ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားခြင်း)
(Intro from Pageant Girls)
၁ - ရိုဆလင်းချူး ‘Rosalyn Chu’ ၂ - မဒီလွင် ‘Madee Lwin’
၃ - လူအန်းရွှေ ‘Lu Ann Shwe’ ၄ - အက်ရှလီမို့ ‘Ashley Moh’
၅ - အဉ္ဖလီမို့ ‘Inzaley Moh’
၁၁။ သင်္ကြန် ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် - ဒုတိယပိုင်း (12:35 pm)
Thingyan Performances – II
(၁) ‘တူးပို့’ (က - Sandra, Sara, Amy, Britney, Jamie, Celine, Htet Htet, Hayman and Juliana)
‘Tu Po’ (Dance – Sandra, Sara, Amy, Britney, Jamie, Celine, Htet Htet, Hayman and Juliana)
(၂) ‘ယဉ်တစ်ကိုယ်မယ်’ (က - နီလာမြင့်၊ ဆွေဆွေမြင့်၊ လှလှဝင်း၊ မိမိခိုင်၊ ဂျူလီ နှင့် မြင့်မြင့်ကြည်)
‘Yin Ta Ko Mel’ (Dance – Nilar Myint, Swe Swe Myint, Hla Hla Win, Mi Mi Khaing, Julie and Myint Myint Kyi)
(၃) ‘သင်္ကြန်သံချပ်အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ်’ (ဥက္ကလံ နှင့် ဗေးဧရိယာ သံချပ်ဝိုင်းတော်သားများ)
‘Thingyan Thangyat Performance’ (Oakland & Bay Area Performers)
(၄) ‘ရှာပုံတော် မင်းသားကြီး’ (ဆို - မဘုချေ နှင့် ကိုစောဖြူ၊ က - မပူစူး)
‘Shar Pon Taw Min Thar Gyi’ (Vocal – Bu Chay & Saw Phyu; Dance – Pu Sue)
၁၂။ ‘ကြော့ရှင်းယဉ်သွယ် ၂၀၁၄ သင်္ကြန်အလှမယ်’ ပြိုင်ပွဲ - ဒုတိယပိုင်း (1:20 pm)
‘2013 Miss Bay Area Thingyan’ Pageant – Part II
(Individual Talent Show)
၁၃။ သင်္ကြန် ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် - တတိယပိုင်း (1:35 pm)
Thingyan Performances – III
(၁) ‘မြမန်းဂီရိ’ (စောင်းတီး၊ ဆို - စုဝေ၊ က - ခင်ခင်အုန်း)
‘Mya Mann Giri’ (Burmese Harp & Vocal – Su Wai; Dance – Khin Khin Ohn)
(၂) ‘စုံတွဲ ဖျော်ဖြေမှု’ (တီး၊ ဆို - Rick နှင့် စုဝေ)
‘Musical Performance’ (Music & Vocal – Rick & Su Wai)
(၃) ‘မြူမှောင်ဝေကင်း’ (ဆို - ဇယံဓ၊ တီး - စုဝေ၊ က - အိအိဖူး)
‘Myu Mhaung Wai Kinn’ (Vocal – Zayanda; Harp – Su Wai; Dance – Ei Ei Phoo)
(၄) ‘ကိုးရီးယား အက’ (က - Ann Chang, Jureen Huang, Nelly Shu and Emi)
‘Korean Dance’ (Dance – Ann Chang, Jureen Huang, Nelly Shu and Emi)
၁၄။ ဗေးဧရိယာ မျိုးဆက်သစ် မြန်မာကလေးငယ်များ၏ ဖက်ရှင်ပြပွဲ (2:40 pm)
(မော်ဒယ် – Sandra, Sara, Amy, Britney, Jamie, Celine, Htet Htet, Hayman, Juliana and Heidi)
Bay Area Burmese Kids Fashion Show
(Models – Sandra, Sara, Amy, Britney, Jamie, Celine, Htet Htet, Hayman, Juliana and Heidi)
၁၅။ ‘ကြော့ရှင်းယဉ်သွယ် ၂၀၁၄ သင်္ကြန်အလှမယ်’ ပြိုင်ပွဲ - တတိယပိုင်း (နောက်ဆုံး) (2:50 pm)
‘2014 Miss Bay Area Thingyan’ Pageant – Part III (Final)
၁၆။ ချိုင်းနားအဲလိုင်း မြန်မာပြည် အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ် ကံစမ်းမဲ ဖွင့်လှစ်ခြင်း။ (3:05 pm)
China Airlines Round-Trip Air Ticket Lucky Draw
၁၇။ သင်္ကြန် ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် - စတုတ္ထပိုင်း (3:20 pm)
Thingyan Performances – IV
(၁) ‘နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်သမျှ’ (ဆို - ကိုခိုင် နှင့် မလဲ့လဲ့ထွန်း)
‘Nha Ko Tu Chit Tha Mya’ (Vocal – Ko Khine & Ma Lei Lei Tun)
(၂) ‘သင်္ကြန်မိုး’ (ဆို - နီလာမြင့်၊ က - အေမီ၊ ဂျူလီယာနာ နှင့် ဂျူလီယာ)
‘Thingyan Moe’ (Vocal – Nilar Myint; Dance – Amy, Juliana and Julia)
၁၈။ ‘ကြော့ရှင်းယဉ်သွယ် ၂၀၁၄ သင်္ကြန်အလှမယ်’ ဆုပေးပွဲ (3:40 pm)
‘2014 Miss Bay Area Thingyan’ Awards Ceremony
၁၉။ ‘နှုတ်ခွန်းဆက်’ သင်္ကြန်ပိတ်ပွဲ (3:50 pm)
‘Hnote Khun Set’ Thingyan Closing Song
၂၀။ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးခြင်း နှင့် စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်း
Thingyan Closing Announcement and Group Photo
*** ပြီးပါပြီ - The End ***
(ဤသင်္ကြန် အစီအစဉ်များသည် အခြေအနေအရ အပြောင်းအလဲ အနည်းငယ် ရှိနိုင်ပါသည်။
These Thingyan Programs may be subject to change.)
SF Bay Area ၏ ၂၀၁၄ မြန်မာ Community Center သင်္ကြန်ပွဲ အစားအသောက် အလှူရှင်များ စာရင်း
(List of 2014 Thingyan Food Donors)
၁။ မြန်မာကွန်မြူနီတီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ (BMCCC) ပုဇွန်ခွက်ကြော်
Burmese (Myanmar) Community & Cultural Center (BMCCC) Committee Pazun Khwet Kyaw (Shrimp Tempura)
၂။ မခင်အေးမြင့် (မြန်မာပြည်သား) အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ
Khin Aye Myint (Myanmarpyithar) Coconut Chicken Noodle Soup
၃။ စေတနာ့ရောင်ခြည် (မဝါနှင့် သူငယ်ချင်းများ) အဖွဲ့ မုန့်ဟင်းခါး
Cetana Yaung Chi Friends Mohinga (Catfish Chowder Noodle Soup)
၄။ မမီးမီး နှင့် ဥက္ကလံအဖွဲ့ ယိုးဒယား-ဆိုက်ကော်
Ma Mie Mie and Oakland group Thai Saikaw
၅။ Dr. Dominic Chiong and Daw Mie Mie Chiong Family ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ (Shwe Taung Noodle)
၆။ မြန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်များအဖွဲ့ ဘူးသီးကြော်
Burmese American Democratic Alliance (BADA) Fried Squash
၇။ မြန်မာအမေရိကန် အမျိုးသမီး မဟာမိတ်အသင်း ရှမ်းတို့ဟူးသုပ်
ဦးကျော်စွာ & ဒေါ်မြမြသွင်မိသားစု၊ ဒေါ်ထွေးလေးခိုင်၊ မြရွှေမြိုင် နှင့် Melinda Yu
Burmese American Women Alliance (BAWA) U Kyaw Swar & Shan Tofu Salad
Daw Mya Mya Thwin Family & Daw Htway Lay Khine, Melinda Yu,
Mya Shwe Myaing (Burmese Methodist Fellowship)
၈။ ကိုကျော်လှ နှင့် မမိုးမိုးနိုင် မိသားစု တို့ဟူးကြော် (Fried Tofu)
၉။ ကရင်တိုင်းရင်းသားများ မိသားစု မုန့်လုံးရေပေါ်
Karen Friends and Families Burmese Water Dough Ball
၁၀။ မေရီချောင်း၊ ဒေါ်ခင်လှိုင် ဖါလူဒါ၊ ပင်ပွားကျောက်ကျော၊ လက်ဖက်ရည်၊
Mary Chow and Daw Khin Hlaing Falooda, Jello Drinks, Tea and Burmese Tofu Salad
၁၁။ ကိုဟိန်း၊ မနီလာလွင် မုန့်လက်ကောက်ကြော်
Ko Hein and Ma Nilar Lwin Burmese Fried Donut
၁၂။ ဒေါ်မာဂရက်လင်း၊ ဒေါ်ဒေစီလင်း မိသားစု ကြက်သားဒံပေါက်၊ ဖာလူဒါ
Daw Margaret Lim and Daw Daisy Lim Family Chicken Biryani & Falooda
၁၃။ မြန်မာလူငယ်များအစည်းအရုံး (BYA) ရေ၊ ဆိုဒါ နှင့် Energy Drinks
Burmese Youth Association (BYA) Bottled Water, Soda, and Energy Drinks
၁၄။ ဒေါ်သဲသဲ၊ ဒေါ်မြမြနှင့် အဖွဲ့ မန္တလေးမြီးရှည်
Daw Thae Thae and Daw Mya Mya Group Mandalay Meeshay Noodle
၁၅။ ‘ခြစ်မှာပဲ’ သူငယ်ချင်းများ မြန်မာရေခဲခြစ်
Chit Mhar Bae Friends Burmese Shave Ice
၁၆။ Ledu Restaurant ခေါက်ဆွဲကြော် (Fried Noodle)
၁၇။ ကိုသက်တင် နှင့် မမိုးစံ မိသားစု နန်းပြားသုပ်
Ko Thet Tin & Ma Moe San Family Nan Pyar Thok (Flat Noodle Salad)
၁၈။ ကိုနန္ဒ၊မဥမ္မာ ဖာလူဒါ
Ko Nanda and Ma Ohmar Falooda
၁၉။ ဦးအောင်မြင့်ဦး၊ ဒေါ်သီတာခင် နှင့် သမီးမနှင်းဦးခင် အညာမုန့်လက်ဆောင်း
Ko Aung Myint Oo, Ma Thidar Khin & Hnin Oo Khin Mont Lat Saung
၂၀။ ပုံညေသီ ရေမုန့် ၊ကောက်ညှင်းငချိပ်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ဆီထမင်း၊
Pon Nyay Thi Yay Mont, Sticky Rice, Si Htamin and Mont Si Kyaw
၂၁။ ကိုတင်အောင် နှင့် မမြတ်မြတ်လှိုင် မိသားစု လက်ဖက်ရည် နှင့် စမူဆာ
Ko Tin Aung & Ma Myat Myat Hlaing Family Burmese Tea and samosa
၂၂။ Steven Hwang နှင့် Leang Chyau Hwang မိသားစု လသာ ရွှေရင်အေး နှင့် ထိုင်ဝမ်းခေါက်ဆွဲအေး
Steven Hwang& Leang Chyau Hwang Family Latha Shwe Yin Aye and Taiwan Cold Noodle
၂၃။ ကိုနေထွဋ်၊ မခင်စန်းမြင့် ပဲပြုတ်၊ သောက်ရေသန့်
Ko Nay Htut and Ma Khin San Myint Boiled Peas and Bottled Water
၂၄။ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး မိသားစု ထမင်း နှင့် လက်ဖက်သုပ်
Daw Myint Myint AyeFamily Tea Leaf Salad and Rice
၂၅။ ကိုအောင်မင်း၊ မစန္ဒာ မိသားစု ခေါက်ဆွဲသုပ်
Ko Aung Min and Ma Sanda Family Noodle Salad
၂၆။ ဦးမြင့်အောင် နှင့် ဒေါ်ခင်သူဇာရွှေ မိသားစု မြန်မာထမင်း နှင့် ဟင်း
U Myint Aung & Daw Khin Thuzar Shwe Family Burmese Rice and Curry (For May24th Volunteers)
၂၇။ ကိုမောင်ဝင်း၊ မလှလှဝင်း မိသားစု ဒံပေါက် နှင့် စားဖွယ်စုံ
Ko Maung Win and Ma Hla Hla Win Family Biryani
၂၈။ ဦး Richard Chu ၊ ဒေါ်ဘေဘီ မိသားစု ကြက်သားဆာတေး
U Richard Chu and Daw Babe Family Chicken Satay
၂၉။ Burma House မြန်မာစားသောက်ဆိုင် နှင့် အလွမ်းပြေ ပဲပြုတ် မြန်မာထမင်းကြော် နှင့် ဟင်းလျှာ
Burma House Restaurant Fried Rice and Curry (For May 25th Volunteers)
၃၀။ U Richard Park နှင့် ဒေါက်တာ မူမူမြင့် မိသားစု ထမနဲ
Richard Park and Dr. Mu Mu Myint Family Burmese Sticky Rice
၃၁။ Charles နှင့် Salina Chu မိသားစု မုန့်လုံးရေပေါ်
Charles and Salina Chu Family Mont Lone Yae Paw
၃၂။ ကိုထွန်းနိုင်၊ မခင်လေးယု မိသားစု ရွှေထမင်း
Ko Tun Naing and Ma Khin Lay Yu Family Shwe Htamin
၃၃။ ဒေါ်ကျင်မွှေး လက်ဖက်သုပ်၊ ဂျင်းသုပ်၊ ကုန်မျိုးစုံ
Daw Kyin Hmwe Tea salad, Ginger Salad & Dried Foods
၃၄။ ဦးမောင်မောင်မြင့် နှင့် ဒေါ်ခင်လှယဉ် ပလောပီနံ ဆနွင်းမကင်း၊ ကြက်ဥပူတင်း၊ ကျောက်ကျော
Julie Chan & ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် ဖျော်ရည်
U Maung Maung Myint and Daw Khin Hla Yin, Julie Chan & Daw Myint Myint Kyi Assorted Burmese Desserts & Jelly Drink
၃၅။ ကိုပန်းသီး နှင့် မိတ်ဆွေများ မိသားစု သစ်သီးစုံ (စတုဒိသာ)
Ko Pan Thee Family and friends Assorted Fruits
၃၆။ မြန်မာ့ဂဇက် သတင်းစာ (Mayanmar Gazette) Starbucks Coffee (စတုဒိသာ)
၃၇။ ကိုမင်းမင်းထွန်း နှင့် မမိုးအိစံ ရေခဲခြစ်သုပ်၊ ငှက်ပျော၊ အာလူး ဆနွင်းမကင်း
Ko Min Min Tun and Ma Moe Ei San Ice Shave Salad and Banana & Potato Dessert
၃၈။ ကိုမောင်မောင်သိန်း နှင့် မစန္ဒာမိသားစု ပဲပြုတ် (အလွမ်းပြေ)
Ko Maung Maung Thein and Ma Sandar Family Burmese Boiled Peas
(ဒေါ်နှင်းမိသားစု မှ နိဗ္ဗာန်ဈေး coupon $50 ဖိုး ၀ယ်လျှင် Stability Exercise Ball တစ်လုံး မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပါမည်၊၊)
(ဤစာရင်းသည် လက်ရှိ လက်ခံရရှိထားသော အစားအသောက် အလှူရှင်များ စာရင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်တိုးသော စာရင်းကို ထပ်မံ တင်ပြပါမည်။)
ကြော့ရှင်းယဉ်သွယ် “၂၀၁၄ သင်္ကြန်အလှမယ်” ပြိုင်ပွဲဝင် လှပျိုဖြူလေးများစာရင်း(List of “2014 Miss Bay Area Thingyan” Pageant Contestants)
1. Rosalyn Chu
2. Madee Lwin
3. Lu Ann Shwe
4. Ashley Moh
5. Inzaley Moh
Bay Area Thingyan Event Helpers & Coordinators
1. Video - Ko Min Min and Eagle Video Group & Aung Zay TV Media
2. Photography - Ko Donald Shu, Ko Steven Chang, U Stephen Khine (Trio) & Bay Area Photographers
3. Advertisement - Shwe Videos, Mandalay Gazette, Burmese Classic & Myanmar Gazette Newspaper
4. DJs - Phil, KS Thant
5. Stage Construction - Ko Maung Maung (Fremont)
6. Stage Decorations - Ko Kyaw Kyaw Soe, Ko Than Htike, Ko Sai & Oakland Burmese Ethnic Families
7. Entertainment Programs - Ma Myat Soe Mon, Ma Kyin Nar Aye, Ma July Hsu and Ko Wai Phyo
8. SF Bay Area Thingyan Theme Art - Tin Thiri (Dr. Yee Yee Htwe)
9. Water Pavilion Banner & Program Booklet Designs - Ko Win Hlaing
10. Water Playing Pavilion - Ko Moe Kyaw, Ko Moe Zaw & Ko Nyi Nyi Than
11. T-shirt Printing - Ma Zargy Myint Aung and Ko Kyaw Kyaw Soe
12. Thet Gyi Pu Zaw Pwe (Paying Respect to Elders) - Theravada Dhamma Society (TDS) & Ma Eidarli Myint Aung
13. Games - Ko Myo & Ma Eidarli Myint Aung
14. Awards for Games - Ma Kyin Nar Aye and Friends
15. Make-up - Ma Chit Ma Ma Salon
16. Burmese Musical Instruments - Rick and Ma Su Wai
17. Burmese Ceremonial Costumes - Ko Kyaw Min Oo and Ma Barbara Shu
18. Program Booklet - Ko Kyaw Kyaw Soe and Ko Wai Phyo
19. 2014 Miss Bay Area Thingyan Pageant - May Ling Phyu
20. Flyers Design - Jaimie Van, Ko Kyaw Win
21. Food Coordinators - Ko Cho Oo & Daw Htway Lay Khine
22. Finance Coordinators - Ma Zargy Myint Aung & Ma Nandi Kyaw Min
23. MCs - Adrian Zaw and May Zin Soe
24. Sponsor coordinators - Ko Wai Phyo, Ma Nwe Oo, Ma Zargy Myint Aung, Daw Htway Lay Khine, Ko Cho Oo,
Ko Kyaw Kyaw Soe, Ko Kyaw Min Oo, Ma Nandi Kyaw Min & Ma Kyin Nar Aye
25. PR & VIPs - Ma New Oo, Valerie Sheibels, Mary Nicely
26. Community Booths - Ma Mya Shwe Myaing, Ko Wai Phyo
27. Park Rental - Burmese Youth Association (BYA)
28. Volunteers - Volunteers from San Francisco Bay Area
29. Transport Cars Providers - Kusalakari Monastery, Ko Maung Maung (Fremont), Ko Myo Lwin
30. Food Utensil Supplies - Ko Sein
31. Program Booklet Printing - Tony Ngo (Oakmead Printing)
32. First Aid and AED - United States Burmese Medical Association (USBMA)
(ဤစာရင်းသည် လက်ရှိ လက်ခံရရှိထားသော စာရင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်တိုးသော စာရင်းကို ထပ်မံ တင်ပြပါမည်။)
2014 Burmese (Myanmar) Community Center Fundraiser SF Bay Area Thingyan Event ၌
စီစဉ် ကူညီ အားပေး ပါဝင်ကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်း (List of participating Organizations)
2. Aung Zay Media
3. B. K. Kee Foundation
4. Burma House Restaurant
5. Burma Refugee Family Network (BRFN)
6. Burmese American Democratic Alliance (BADA)
7. Burmese American Women Alliance (BAWA)
8. Burmese Classic Media
9. Burmese (Myanmar) Community Center Committee (BMCCC)
10. Burmese Methodist Fellowship
11. Burmese Youth Association (BYA)
12. Community Health for Asian Americans (CHAA)
13. Community Partners International (CPI)
14. Dhamma Yin Daw Group
15. Karen Ethnic Families Group
16. Kusalakari Monastery
17. Ledu Restaurant
18. Main Main Kyay Oh - Kyain Kyain Restaurant
19. Mandalay Gazette
20. Mike Min Min & Eagle Video Group
21. Mettananda Vihara Monastery
22. Mudita Shwe Kyaung Monastery
23. Myanmar Gazette
24. Nicely Done Solutions, Inc.
25. Oakland Burmese Ethnic Families
26. Pan Pyoe Myay (Flower Land) Group
27. Pon Nyay Thi
28. Shwe Videos Media Group
29. Southern California Burmese Association (SCBA)
30. Theravada Buddhist Youth Group (TBYG)
31. Theravada Dhamma Society (TDS)
32. United States Burmese Medical Association (USBMA)
(ဤစာရင်းသည် လက်ရှိ ရရှိထားသော စာရင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်တိုးသော စာရင်းကို ထပ်မံ တင်ပြပါမည်။)
Please Sign-up for Thingyan Volunteers
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1eZFn19sPNxMNtmYhLmv3Ml4sNB9PSUI_SDokMKFVX9U/viewform?embedded=true" width="760" height="1440" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe>
Event Layout and Free Parkings
See you all at 2014 SF Bay Area Thingyan!
Posted by Mg Yekhaung (Silicon Valley) at 4:41 PM